Fivarotana idiram-piara McDonald’s iray ao Japan nahazo fitsidihana avy amin’ny soavaly nohasinina · Global Voices teny Malagasy
Heverina ho irak'andriamanitra ny soavaly nohasinina
Voadika ny 26 Oktobra 2021 4:26 GMT
Soavaly ao Cape Toi, Miyazaki, avy amin'i Koji Ishii. Avy amin'ny Flickr. Lisansa sary: CC BY 2.0
Asehon'ilay sioka, izay efa voazara mihoatra ny in-5.000 tamin'ny fotoana nanoratana, ny vehivavy iray mitaingina soavaly mandalo fivarotana idiram-piara McDonald, any amin'ny toerana iray ao Japana.
Nandalo fivarotana idiram-piara aho! Ary naka sary anay ny mpiasa iray!
Ny lahatsary dia narantin'ny kaonty Twitter an'i Izume, ilay ‘soavaly masina’ avy ao amin'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman” (吉川八幡神社 御神馬 いづめ 公式), doany Shinto iray miorina ao Nose, any amin'ny zoro be tendrombohitra sy ambanivohitra ao amin'ny prefektioran'i Osaka.
Ny nitaingina azy dia miko (巫女), vehivavy mpiasa sy namana miasa ao amin'ny doany, raha ny soavaly kosa—araka ny mombamomba azy ao amin'ny Twitter—dia efa-taona izay monina ao amin'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman.
Misy soavaly teratany kiso, antsoina hoe Izume nohasinina tamin'ny Oktobra 2019, hanamarihana ny fanombohan'ny vanim-potoana Reiwa ao Japana. Nampirisihina ny mpitsidika doany hamahana ny sakafo ankafizin'i Izume indrindra, izay ahitana akondro sy karaoty. Na izany aza dia voarara ny fisafosafoana azy hatramin'ny fotoana nanaovana an'i Izume ho soavaly nohasinina.
Heverina ho irak'andriamanitra, ary manana fifamatorana lalina amin'ny fanajana ny doany Shinto ny soavaly nohasinina (神馬, shinme, shinma, kami-uma) ao Japana. Araka ny departemantan'ny raharahan-kolontsaina ao amin'ny prefektioran'i Mie:
Nofehezin'ny natiora ny fiainan'ny vahoaka taloha [tao Japana] amin'ny ankapobeny—Noeritreretina fa nonina tao amin'ny natiora Andriamanitra, ary nanana ny lanjany ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Maro ny fomba fivavahana, ary ao anatin'izany ny fanaovana fanatitra sy fanomezana manokana ho an'ny soavaly velona.
Nohazonina manokana ho ao amin'ny doany ny soavaly nohasinina ao Japana. Na izany aza, noho ny halafon'ny famahanana sy ny fikarakarana azy ireny amin'ny ampahany, dia misy ireo doany sasantsasany mampiasa fisolo antsoina hoe ema.
Natao tamin'ny voalohany tamin'ny tanimanga nodorana, ary taty aoriana tamin'ny hazo sy indraindray tamin'ny taratasy, ny ema dia karazana solaitra kely izay anoratan'ny mpivavaka vavaka na hafatra ho an'ireo andriamanitra. Efa lasa betsaka izy ireny amin'izao fotoana izao any amin'ireo doany Shinto manerana an'i Japana.
Ema amidy ao amin'ny doany Kanda Myojin, Tokyo. Saripikan'i Nevin Thompson. Lisansa sary: CC BY 3.0
Efa hatrany amin'ny 1000 taona mahery any ny tantaran'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman, raha natokana ho amin'ny fatsakana voajanahary iray loharano voalohany an'ny mponina ao an-toerana ny toerana.
Avy eo ihany koa ny doany nampiantranko tempoly Boddista natokana ho an'i Yakushi nyorai (Bhaisajyaguru), ilay Boddhan'ny fanasitrahana sy ny fanafody ao amin'ny Boddisma Mahayana. Ny karazan'andriamanitra hajaina indrindra ao amin'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman dia ilay Amperora Ojin zary lasa angano, izay lazaina ho nanjaka tanelanelan'ny taona 200 sy 300 amin'ny vanim-potoana ankehitriny, ary ivavahana ho andriamanitra Hachiman (八幡神), andriamanitry ny ady, rehefa nodimandry.
Efitra lehibe amin'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman, prefektioran'i Osaka. Avy amin'i Kujime Kazuya. Avy amin'ny Wikipedia. Lisansa sary: CC BY-SA 4.0
Amin'izao fotoana izao fantatra ao an-toerana ity doany kely ity—ary, noho ny fijoroany ao amin'ny media sosialy, an-jotra—tsy noho i Izume ilay soavaly ihany, fa noho ny fampisehoana rindrankira sy ireo fiaran-dalamby roa tsy nampiasaina intsony, fanomezana avy amin'ny orinasan-dalamby iray tao an-toerana izay nitsahatra tamin'ny asany tamin'ny taona 2016.
Amin'ny (Alahady) 24 oktobra, ao anatin'ny fetiben'ny mihitsan-dravina ao amin'ny doanin'i Yoshikawa Hachiman, hilalao mivantana ao ny tarika Half-Ripe Blood (Ra masaka tapany) sy Roy Roy-Roy Roy!
Koa satria moa mba mandehandeha manala andro miaraka amin'ny “reniny” ry Izume, dia azonao zohiana ao amin'ny Twitter ny anjoriany: